Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | Civil Wars – ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ
Category Archives: Civil Wars – ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2yWmYkF http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted in Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
Posted on October 26, 2017 by freeburma
အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်NCA အကောင်အထည်ဖော်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပနေပါတယ်။ ဒီလို ပြန်လည်သုံးသပ်ရတာဟာ နိုင်ငံရေးအရ တူညီတဲ့ ညှိနှိုင်းမှုရရေး၊ လက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို စနစ်တကျဖြေရှင်းရေးနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းရှာကြံရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်း NCAကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်က ပြောဆိုပါတယ်။
via သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2iAplDy http://ift.tt/2rs33WN
Posted on October 23, 2017 by freeburma
အစိုးငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် UNFC နဲ့တွေ့ဆုံ
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2z45lAc http://ift.tt/2rs33WN
Posted on October 17, 2017 by freeburma
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနှင့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ အန်စီအေစာချုပ် ပြန်သုံးသပ်ရန် သဘောတူ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အပစ်ရပ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ မနေ့က တွေ့ဆုံပြီး အန်စီအေစာချုပ် ပြန်သုံးသပ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက နေပြည်တော်မှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး (အန်စီအေ) စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သဘောတူ ခဲ့ကြတာလို့ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးခိုင်စိုးနိုင်အောင်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (ဂျေအိုင်စီအမ်) ပုံမှန်ခေါ်ယူဖို့ကိုလည်း သဘောတူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အန်စီအေစာချုပ်ကို အခြေခံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ ဂျေအိုင်စီအမ် အစည်းအဝေး ပုံမှန်ခေါ်ယူနိုင်မှု မရှိတာဟာ အဓိက အားနည်းချက်တခုဖြစ်တယ်လို့လည်း အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အန်စီအေ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ၂ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်း အနားမှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ အပစ်ရပ်လက်နက်ကိုင် ၈ ဖွဲ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
The post နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနှင့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ အန်စီအေစာချုပ် ပြန်သုံးသပ်ရန် သဘောတူ appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2gg0mRP http://burmese.dvb.no
Posted on August 28, 2017 by freeburma
14 hours 29 minutes ago Sun, 08/27/2017 – 15:14
Hits: 35801 times
ရန်ကုန် ၊ သြဂုတ် ၂၇ ။ ။ မောင်တောအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းမီဒီယာအချို့တွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးက ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည့် အကြမ်းဖက်သမားများ ဆိုသည့် စကားလုံးကို သုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲ အခြားဝေါဟာရများဖြင့် အမျိုးမျိုးရေးသားဖော်ပြနေကြသည်ကို တွေ့မြင်နေရသည်ဟု အတိုင်ပင်ခံရုံး၏ ယနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အကြမ်းဖက်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရာတွင် ထောက်ခံခြင်း ၊ အားပေးကူညီရာ ရောက်စေသည့် ပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်း ၊ ထောက်ပံ့ခြင်း ၊ မီဒီယာများမှ ထောက်ခံရေးသားခြင်းများကို မပြုလုပ်ရန်နှင့် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တွေ့ရှိပါက ပြည်တွင်း၌ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ အရေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ပြည်ပမှအားပေး လုပ်ဆောင်မှုများတွေ့ရှိပါက နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ကို အသိပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့၌ တောင်ဘဇာကျေးရွာကို အစွန်းရောက် ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက်သမားများ ပ်ိတ်ဆို့ဝိုင်းထားစဉ် အချို့သော INGO ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပြီး အတည်ပြုနိုင်ရန် ဆက်လက် စုံစမ်းလျက် ရှိသည်။ အလားတူ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မေယုတောင်ပေါ်၌ အကြမ်းဖက်သမားများ ခိုအောင်း စခန်းချရာ တဲများတွင်လည်း ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် (WFP) မှ ဖြန့်ဝေထားသော စွမ်းအားမြင့် ဘီစကစ်များ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်သည်”ဟုလည်း အတိုင်ပင်ခံရုံးထုပ်ပြန်ချက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မောင်တောဒေသ တိုက်ခိုက်မှုကို အစိုးရက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် သံရုံးအချို့က ရှုတ်ချကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
via Home http://ift.tt/2ghnqTz http://ift.tt/OTcCHv
Posted in Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ	| Tagged Borders, Civil Wars, Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
Posted on August 12, 2017 by freeburma
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2vO2BVB http://ift.tt/2rs33WN
Posted on June 29, 2017 by freeburma
ဒီUNFC ရဲ့ ညီလာခံ မှာ အဖွဲ့ဝင်တွေ ထွက်သွားတွေလည်း ရှိသလို
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2sme6mv http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted in Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Ethnics, Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
Posted on June 22, 2017 by freeburma
ရခိုင်မြောက်ပိုင်း အကြမ်းဖက် သင်တန်းကို ဘယ်သူတွေ ပို့ချတာလဲ
ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း အပါအအဝင် ပစွည်း အသုံးဆောင်တွေကို တွေ့ရှိ။
ပြည်ပမှာ အကြမ်းဖက် သင်တန်း တက်ရောက် လာသူတွေက ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဒေသထဲ သင်တန်းတွေ ပြန်ပေး နေတယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ရုံးရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မေယုတောင်ကြောပေါ် အကြမ်းဖက် သင်တန်း အဖြစ် အသုံးချ နေတယ် ဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေက ယူဆထားတဲ့ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း အပါအအဝင်၊ လူနေတဲနဲ့ ပစွည်း အ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2sGJbho http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted on June 7, 2017 by freeburma
အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်နှင့် ဇွန်လ ၁၂ ရက်မတိုင်ခင် ချင်းမိုင်၌ တွေ့ဆုံရန် UNFC အကြောင်းပြန်၊ မူအားဖြင့် သဘောတူညီထားသည့် အချက်ကိုးချက်၊ (KIA)နှင့် `၀`နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရေး ကိစ္စများ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်မည်
အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင် (PC) က NCA တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဆက
via The Ladies http://ift.tt/2qWgSdu http://ift.tt/1t35IDK
Posted on June 5, 2017 by freeburma
KIO ဒု ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လ
ဒုတိယ ဥက္ကဌ ရှင်းလင်းသွားသည့်အကြောင်းမှာ KIO အနေဖြင့် UNFC က နှုတ်ထွက်ဖို့ စာတင်ပြီး UWSA ‘ဝ’ ဦးဆောင်သော နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2saM3FI http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted on June 2, 2017 by freeburma
Posted on May 27, 2017 by freeburma
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြောက်ပိုင်း အဖွဲ့တွေ တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကြား နိုင်ငံရေး အရ ထဲထဲဝင်ဝင် မဆွေးနွေး ခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဆက်ဆံရေး ဆက်လက် ထားရှိသွားမယ့် အကြောင်း ပြောဆို ခဲ့ကြတယ် ဆိုပြီး ဝပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA က ပြောပါတယ်။
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ် သဘောတူမှု စာချုပ် NCA ထဲ ပါဝင်ဖို့ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်က တိုက်တွန်း နေပေမယ့် လက်ရှိ NCA ကိုတော့ လက်မှတ် ရေးထိုးမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး UWSA ရဲ့ ပြင်ပ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2s4HUPW http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted on May 26, 2017 by freeburma
ကေအိုင်အိုခေါင်းဆောင်နှင့်အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိလာ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နေ့လယ်စာနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံဖို့ ဖိတ်ကြားထားတဲ့အတွက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) ဥက္ကဋ္ဌ အန်ဘန်လနဲ့ ဇနီးတို့ ဒီကနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက နေပြည်တော် မြနန်းဘုံသာလမ်းက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ နေအိမ်ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကေအိုင်အို ခေါင်းဆောင်နဲ့တွေကဆုံပြီးနောက် ဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ကျန်တဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း ဆက်လက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။
The post ကေအိုင်အိုခေါင်းဆောင်နှင့်အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိလာ appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2r4rgRd http://burmese.dvb.no
Posted on May 25, 2017 by freeburma
UWSA ဦးဆောင်တဲ့ မြောက်ပိုင်းစစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ အပြင်ပန်းမှာ ဒီကနေ့ သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့သလို၊ မနက်ဖြန်မှာတော့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2rlUKNr http://ift.tt/Tf1V41